Nkọwa ihe omuma esi eme ka ị nwetaghachi ebe nrụọrụ gị mgbe mwakpo ọjọọ
Ahụmasị kachasị emetụ n'ahụ onye nwe ụlọ bụ mkpesa ọjọọ nke ụlọ ọrụ ha.Na ọnọdụ a, a na-agba ndị mmepe ume ka ha nọrọ jụụ ma mezie usoro ziri ezi. Frank Abagnale, nke Ọkachamara Onye Ọrụ Nchịkọta Ndị Ọrụ Kasị Elu, na-enye usoro nke ịghaghachi ebe nrụọrụ hacked. Ka a pụọ!
Kasị njọ, lelee kọmputa gị maka nje ọ bụla. Nke a bụ ihe nhazi nke na enyere akaiji wepu ohere nke inwe kọmputa gị dika isi iyi agha tupu ịmalite ịnaghachi saịtị ahụ. Na ederede a, ya mere, nyochakọmputa gị maka ọrịa, malware ma ọ bụ nje kwesịrị ịbụ nzọụkwụ mbụ - small camera security system. Ihe nyocha nke nje nyocha akwadoro bụ EU-Cleanersite na ebe obibi Anti-Botnet, Germany. Ụzọ ahụ na-enyere onye mmepụta saịtị aka ihichapụ ihe ọ bụla malware maka n'efu. Tụkwasị na nke a, nke aụlọ ọrụ na-eletụrụ anya na-eziga nọmba tiketi na kọntaktị site na email na onye nwe ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na ebe nrụọrụ hacked.
Nke abuo, a ghaghi igbanwe okwu okwuntu o bula. Ọ bụ nzọụkwụ na-achi achi na ndị na-agba ọsọenweghị ike ịbanye na nchekwa data gị, weebụsaịtị ma ọ bụ ohere weebụ. Enwere ike ijikwa okwuntughe site na ebe ndị ahịa na ebe nrụọrụ weebụ na ngalaba ngalabanke saịtị. Tụkwasị na nke a, enwere ike ịmebe nchedo paswọọdụ site na ịnweta ohere weebụ site na usoro protocol dịka Nchekwa Ntọala SecureProtocol (SFTP), na-agbanwe agbanwe okwuntughe na ọrụ ndị ọzọ ma na-ahọrọ paswọọdụ kachasị nchebe. Okwesighi okwu ekwesighi iji dikantinye okwuntu maka nchedo weebụ.
Nke atọ, jiri phpMyAdmin iji tọgharịa mkpokọta nke ebe nrụọrụ weebụ ha..Ọ bụrụ na nwe nwe ụlọ enweghị ikeịbanye n'ime ngalaba nke ha na saịtị ha, ndị na-agba ọsọ nwere ike gbanwere paswọọdụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ ahụ. Na nke a, nkea ghaghị gbanwee okwuntughe dị na ọdụ data. Enwere ike ime nke a site na iji phpMyAdmin maka ndị mmepe iji WordPress.
A ga-enyocha mmerụ ahụ na nzọụkwụ na-esote iji weghachi ebe nrụọrụ hacked. Ọ gụnyerena-enyocha ọnọdụ na atụmatụ na esi aga n'ihu. Kpebisie ike na faịlụ ndị nje ahụ, nkwenye ọ bụla na data dị mwute, na ịnwetanchekwa data ma ọ bụrụ na emetụtara saịtị ndị ọzọ na sava weebụ gị. Usoro nwere ike igbu site na iji Google Webmaster Ngwaọrụ.
Na-esote, weghachite ndabere na lelee malware. Na nke a, onye nwe ụlọ ebe kwesịrịdochie faịlụ ọ bụla emetụtara na faịlụ nchekwa nke na-adịghị emerụ ahụ. Tụkwasị na nke a, a ghaghị weghachite nchekwa data ahụ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omumea gaghị ekwe ka ndị na-agba ọsọ mbanye banye na nchekwa data ahụ. Naanị cheta, abụọ dị mkpa backups bụ Joomla na WordPress.
Melite isiokwu, plugins, extensions and applications. Ndị na-agba ọsọ na-ejikarị ncheoghere ndị ọzọ, mgbakwunye, na gburugburu. Ya mere, ozugbo emereghachịri nkwado ndabere ahụ, a ghaghị mechie oghere nchebe niile site na imelitegburugburu, agbanye, na ngwa. Onye ọ bụla plugins na-emetụta nchebe nke saịtị.
N'ikpeazụ, ọrụ iji wepụ saịtị ahụ site n'aka ndị oji. Yahoo, Google, na Bingndị na-ede akwụkwọ oji maka saịtị ndị nje virus nwere. A na-enye saịtị ọ bụla etinye na Google blacklist, dịka ọmụmaatụ, na-enye ya ntaramahụhụ ma ọ bụ ọbụna wepụrụ yasite na nchọta ọchụchọ. Ya mere, mgbe ị bubatara nkwado ndabere dị ọcha na ederede na-agbanwe agbanwe, gwa ndị ọrụ ọchụchọ ka ewepụ gị na ndị blacklists.
N'ikpeazụ, mwakpo na saịtị bụ akụkụ nke ụwa nke oge a. Ọ bụrụ na saịtịna-ama jijiji, ndị na-emepe ihe nwere ike ijuanya. N'oge a, ọ dị mkpa ka ịnọ jụụ ebe ị maara ugbu a ihe ị ga-eme ma gbakee n'ụzọ dị irèa weebụsaịtị.